Iingoma ze-Instagram: ungawatshintsha njani amabali e-Instagram kunye nokunye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | I intanethi
Iakhawunti yethu ye-Instagram ukuba siyikhathalela nge-emojis kunye neekhonkco singayishiya kakuhle, kodwa ukuba sisebenzisa iileta ze-Instagram, kwezo zikhethekileyo, singazinika ukubabazodwa okwahlukileyo kunye nokwenzelwe ukwahlula amawaka abanye.
Siza kukubonisa ifayile ye- iintlobo ezahlukeneyo zoonobumba bokuqala onokuyisebenzisa kunye nendlela "esinokuthi sincamathisele" ngayo loo fonti ukuze ivele kwiakhawunti yethu ye-Instagram kwaye ngale ndlela yeyona nto ipholileyo kunabahlobo bethu nakwabo sisebenza nabo.
1 Izicelo zokutshintsha iileta kwi-Instagram
1.1 Iifonti ezipholileyo ze-Instagram
1.2 Iifonti eziColileyo-Isicatshulwa esiPholileyo esiFanelekileyo
1.3 Iifonti ezipholileyo ze-Instagram
1.4 Umbhalo weleta yamagama-Imiyalezo yeKhowudi
1.5 Isicatshulwa esinesitayile
2 Utshintsha njani ifonti kumabali e-Instagram
2.1 Ngokusetyenziswa kwe-Instagram ngokwayo
2.3 Ngokusebenzisa iAdobe Spark
Izicelo zokutshintsha iileta kwi-Instagram
Kukho uthotho lwezixhobo ezifanelekileyo ukuze ukwazi ukutshintsha iileta kwi-Instagram. Singayenza ngokwethu ukukopa isicatshulwa esivela kwiwebhusayithi kwaye usincamathisela kwiprofayile yethu ngokobuqu. Ngalo lonke ixesha unakekele ukuba xa siphinda silayisha iphepha liya kuqhubeka nohlobo olufanayo kwaye akukho zimpawu zingaqhelekanga ziyavela. Sikwacebisa ukuba uyizame kwi-PC, kuba ngamanye amaxesha inokubangela iingxaki kwinguqulelo yedesktop, ngelixa inguqulelo yeselfowuni ingenjalo.
Siza kukunika uluhlu lweeapps ukuze ukwazi ukutshintsha isitayile sakho. Inyaniso, Ukwenza kwikhompyuter kunokubangcono kuwe ukuba uqhele ngakumbi ukusebenzisa iphedi yokuchukumisa okanye imouse. Siza kukubonisa ezonaapps zilungileyo zokutshintsha iileta ze-Instagram.
Iifonti ezipholileyo ze-Instagram
Le app lelona linamanqaku aphezulu kwaye leyo ifunyenwe ngeyona ndlela ibalaseleyo ngabasebenzisi be-Instagram. Ukuba ufuna iifonti ezahlukeneyo, uza kuba nazo kunye nale app, kuba inamagama angaphezu kwe-140. Ngolu luhlu lweefonti, ngaphandle kokwenza iprofayili eyenzelwe wena, unokwenza ubugcisa kunye ne-emoji ngokudibanisa iifonti.
Iifonti ezizodwa Zisekwe kwi-Unicode Kwaye zinokusetyenziselwa ezinye ii -apps zemiyalezo ezinje nge-imeyile. Ukuba isebenzisa i-Unicode kuthetha ukuba ixhaswa ngamaqonga aphambili ngoku: i-Android kunye ne-iOS. Kufuneka uchwetheze umyalezo kwaye ukope. Emva koko uye kwi-Instagram kwaye uyincamathisele kwiprofayili okanye nakupapasho.
Ngapha koko, olu setyenziso lunokugqibelela ekusebenziseni ngokuqhubekayo nge-Instagram. Ukuba ufuna ukubhala amagqabantshintshi, upapasho okanye i-bio, unako nangaliphi na ixesha, kuba amava ekunikezelayo angaphezulu kokugqibeleleyo. Unayo kwi-Android.
Khuphela kwi-Android- Iifonti ezipholileyo ze-Instagram
Iifonti eziColileyo-Isicatshulwa esiPholileyo esiFanelekileyo
Sinolu setyenziso zombini kwi-Android nakwi-iOS, kwaye ngomnye wabo bafumene amanqaku amaninzi. Singayilinganisa neyangaphambili, ke iya kuba ngumcimbi wokungcamla kunye namava. Sisoloko sicebisa ukuba uzame ngaphambili kwaye emva koko uthathe isigqibo, kuba enye yazo inokuba ngcono kuwe ukuvelisa ngexesha elincinci.
Esi sicelo sisixhobo esiguqula isicatshulwa esiqhelekileyo sibe sesimbala esime kakuhle kwaye sikwasinceda ukuba senze ezo mpawu zipholileyo. Into eyiyo ngokwayo ngumenzi weeleta zobugcisa. Ungayisebenzisa Zonke iintlobo zenethiwekhi, nkqu nakuWhatsApp.
Kuphela Kuya kufuneka uchwetheze isicatshulwa, usete isitayile kwaye usikope ukuthatha kwenye insiza kwaye unamathisele.
Khuphela kwi-Android- Iifonti ezipholileyo- Isitayile esiDala esiPholileyo
Khuphela kwi-iPhone- Iileta eziMnandi eziCociweyo eziMnandi zoMatshini oBhalayo
Sikwanayo le app kumaqonga omabini. Kodwa into ehlekisayo yile kwi-iOS kukho uphononongo olungcono kunye nokuhlelwa luluntu. Njengabanye ababini, linoxanduva lokuguqula isicatshulwa esiqhelekileyo sibe ziindidi ezahlukeneyo zefonti.
Isebenza ngendlela efanayo: siyachwetheza, sikope kwaye sincamathisele kwinethiwekhi ekhethiweyo yentlalo. Enye yeengxaki zayo, kwaye ikwakhona kwinguqulelo ye-Android, kukuba ngamanye amaxesha icela umsebenzisi ukuba atyelele iwebhu. Yintoni enokudideka.
Khuphela kwi-iOS-CIifonti ool ze-Instagram
Umbhalo weleta yamagama-Imiyalezo yeKhowudi
Lolu hlelo lokusebenza eyodwa inikezelwe kwisizukulwana seetekisi kwi-unicode, Oko kuthetha ukuba unokufikelela kuluhlu olubanzi lweefonti, iisimboli ezinqabileyo, imihombiso kunye nemiyalezo ebetheliweyo ene-encryption. Inikezelwe ngokulula ekuveliseni isicatshulwa, ke ngekhe ufumane okungakumbi.
Ewe kunjalo, kuya kuba luncedo olukhulu ukongeza isicatshulwa esihle kwi-biografi, Amabali e-Instagram, imiyalezo okanye nayiphi na indawo ye-Instagram app onokuchwetheza kuyo. Ayifumaneki kuwo onke amazwe, ke jonga ukuba ungayifaka na.
Khuphela kwi-Android- Umbhalo weKhowudi yamaFonti oMyalezo
Sinale app kwi-Android kunye ne-iOS kunye iyakusisebenzela ukongeza isicatshulwa ngokuthe ngqo kwezinye izicelo ezinje ngeWhatsApp. Iqulethe okuninzi kweendlela ezahlukeneyo, ukhetho lomxholo, kunye neempawu ezinqabileyo.
Ilula kwaye isisiseko, kodwa iluncedo kakhulu kubungakanani bezinto onokukhetha kuzo. Enye yezona zinto zibalaseleyo kukuba sinazo kumaqonga omabini, ke ukuba unayo i-iPad kunye nesixhobo se-Android, ukuba uyasiqhela, uya kuhlala usisebenzisa ukwenza loo mibhalo ikhethekileyo ye-Instagram.
Khuphela kwi-Android- ISylish
Khuphela kwi-iOS - ISylish
Utshintsha njani ifonti kumabali e-Instagram
Amabali e-Instagram Bona zezona zininzi kwaye kufuneka ujonge nje kuthi xa sihamba ngololiwe, okanye ngebhasi kwisixeko esikhulu. Wonke umntu usebenzisa kwaye uyidlale ukuze abone ukuba bungakanani ubomi babo oogxa bakhe, izihlobo, hayi abahlobo kunye nabalandeli ekwabelwana ngabo.
Ngokusetyenziswa kwe-Instagram ngokwayo
Siza kukufundisa Utshintsha njani ifonti kumabali e-Instagram ukusuka kwi-app ngokwayo. Njengoko sijamelene nenketho yokukwazi ukulayisha ividiyo ehleliweyo kwi-app yokuhlela, enje nge-Adobe Premiere CC, okanye nakwi-PC yethu yenye yeenkqubo zokuhlela eziqhelekileyo, siqala ngokuqala ngokhetho olulula. Emva koko sikubonisa usetyenziso oza kuluhlenga kwiselfowuni kwaye ke ulayishe.
Kuqala sivula amabali e-Instagram.
Sifaka umfanekiso, senza entsha okanye nantoni na ...
Cofa kwi icon kwinxalenye ephezulu yesicatshulwa.
Ngoku nqakraza kwinxalenye ephezulu, kanye embindini ukuswitsha phakathi kweefonti ezi-5 ezahlukeneyo ezinikezelwa yi-Instagram: ezakudala, ezangoku, i-neon, umatshini wokubhala kunye nesibindi.
Sele sinayo ifonti yethu ngohlobo olukhethekileyo lokunceda uphawu lwethu okanye inkampani esisebenza kuyo.
Con I-Animoto sinokufikelela kukhetho olukhulu lweefonti ezingama-36 Oku kubandakanya iicalligraphic, ezintle, iiserif, iisans, isibindi, intle kunye nezinye ezininzi. Sijongene nomhleli wevidiyo othandwayo kakhulu esinokuwusebenzisa kwezinye iinjongo, kodwa eyona nto iphambili kuwo kukuba sele iza nefomathi yamabali e-Instagram ukuze ikwazi ukuyiqamba kwiselfowuni yethu; Oko kukuthi, singaya kwiPC yethu ukwenza la mabali agqibeleleyo e-Instagram.
Saqala ukukhuphela i-Animoto ye-Android, nangona kufanele ukuba kuthiwe ayifumaneki kuwo onke amazwe.
Kwi-iOS unayo ikhonkco kwiVenkile ye App: khuphela kwiVenkile ye App
Sikhetha itemplate yamabali kwaye sifaka umfanekiso okanye ividiyo.
Singatshintsha umbala kunye nezinye izinto zelogo, uphawu kunye nokunye.
Songeza isicatshulwa kwaye sinokukhetha phakathi kwazo zonke iintlobo zeefonti ezinjengeMontserrat, iRoboto, iLato, iAleo Bold nezinye ezininzi.
Sitshintsha umbala kwaye siya kuba nefonti etshintshileyo elungele i-Instagram Stories
Ngokusebenzisa iAdobe Spark
Uhlelo lokusebenza lweAdobe lokwenza umxholo wemultimedia kwinethiwekhi yoluntu kungaphezulu kokugqibeleleyo. Sinazo zombini kwi-Android njengakwi-iOS, ke uya kuba namava afanayo nakwesiphi na iselfowuni.
Siza kulandela amanyathelo afanayo naka-Animoto. Koko kukuthi, sikhetha itemplate yamabali e-Instagram, sikhetha ifoto kwaye sinokusebenzisa iintlobo ezininzi zeefonti ezinayo iAdobe Spark. Njengoko singasebenzisa iimilo, iziphumo, imibala kunye nokunye okuninzi. Kungumcimbi wokuvavanya iiapps ezahlukeneyo kunye nokukhetha eyona ilungele isitayile sethu okanye into esiyifunayo.
Khuphela iAdobe Spark: kwi-Android/ kwi-iOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » Amagama e-Instagram
Iphulo likaMcDonald lokujonga ngokubonakalayo kunye nomdlalo weqonga